हेरेर हर्कमानलाई मुस्कुराई। मुस्कुराउने हेरेर अरूहरूसितजस्तै हर्कमान पनि मुस्कुरायो। त्यसरी सामाजिक प्राणी हुनुको औपचारिकता वरण गर्नुपर्दा हर्कमानको हिँड़ाइ मन्द भइसकेको थियो तर उसले भने हिँड़्न छाड़िसकेकी थिई।
उभिएर बजारबिचमा चिन्नलाई अनुहारमै हेर्नुपर्दा आफूअघि उभिएकी स्त्रीको, हर्कमानलाई असजिलो लाग्यो। अनुहारभरि छरिएको असजिलो हर्कमानको पढ़ेपछि उसले भनी, ‘‘म भाउजू।’’
हर्कमानको मस्तिष्कमा एउटा पुरानो अनुहार उज्यालियो। त्यो अनुहारको सामञ्जस्य यो अनुहारमा खोजथाल्यो हर्कमानले। कत्रो भिन्नता? ऊ छक्क पर्यो। हात जोड़ेर गरेर नमस्कार भनिसकेथ्यो हर्कमानले। ढिलो चिनेकोमा माफ माग्यो उसले।
सू़र्यप्रकाशभन्दा एक वर्ष कान्छो हो हर्कमान जागिरमा। उमेरले कान्छै पॉंच -6 वर्षजति हो कि! तर सिनियर हुँ भनेर घमण्डले कहिले फुलेन एस.पी. शर्मा अरूजस्तो हर्कमानअघि। काम बरू जानेको आफूले हर्कमानलाई जम्मै सिकायो। उनीहरूमा आत्मीयता बढ़्दै गयो। नजिकिँदै गए उनीहरू ।
हृदयबाटै खुशी भएको, हर्कमानले कहिल्यै देखेन एस.पी. शर्मालाई। प्राय: जसो अव्यक्त विषादको बादल मड़ारिरहेको अनुहार लिएर अफिस आउँथ्यो ऊ, केही अबेर पनि। मलिन अनुहार लिएर आफ्नो काम गर्थ्यो। थोरै बोल्थ्यो। तर बेलुकी घर जान जहिले पनि हतारिन्थ्यो।
सूर्यप्रकाशकी स्वास्नीले दृष्टि अघिल्तिरका मान्छेको भिड़लाई दिई केही बेर।
उनीहरू छुट्टिएपछि हिँड़्दै हर्कमानले निक्कै अघि देख्दाको सूर्यप्रकाशकी स्वास्नी सम्झ्यो।
एउटै शिशुको जन्मपछि शारीरिक रूपमा ज्यादै कमजोर भएका परिचित केही स्त्रीहरूका अनुहार सम्झनामा देख्यो उसले। अरू को-को सम्झन आफ्नो मस्तिष्कलाई जोड़ दियो हर्कमानले। सम्झने कोसिसमै हिँड़िरहेको उसको भेट एकजना चिनेको मान्छेसँग भएपछि उसले सूर्यप्रकाश, उसकी स्वास्नी, चिनेका घट्नेहरू जम्मै बिर्स्यो।
—प्रत्येक सिस्टरले एकपल्ट प्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जीवनी पढ़्नुपर्छ।
सिँढ़ीबाट झरेर चेपको मासु दोकानमा उसले आधा केजी मासु किन्यो।
बेलुकी आफ्नी स्वास्नीलाई दाहिने हातको चोर औँला ठड़्याएर उसले भन्यो,‘‘इत्रु भइसकेको छ। मलाई त आशा लागेन। बिचरा एस.पी. दाजु...’’ भनेर ‘‘तिमी खाना किन ठिकसँग खॉंदैनौ,’’ भनेर पनि खुब करायो।
धुप एक बट्टा किनेपछि ऊ एस.पी. शर्माको घरतिर हानियो। माथि डॉंड़ाबाट उसले एस.पी. शर्माको घरआँगनको भिड़भाड़ देख्नुसँगै धुपको तिक्खर वासना थाहा पायो। वासना हो यही तर किन कहिले प्रिय, कहिले अप्रिय?—उसले मन्दिरको यस्तै वातावरण र यो वासनामय वातावरणको तुलना गर्नखोज्यो।
मरेर भुइँमा लड़ेको लाश र त्यो दु:खमा विह्वल जीर्ण शरीर दुवै एकसाथ आँखामा पर्यो हर्कमानको।
गालामा दुवैपट्टि पाहाड़ उठेको, आँखा भॉंसिएका दुवै, होला अट्ठतिस-चालिसको तर साठीको जस्तो देखिने एस.पी. शर्मा फूल र खादा ओढ़ेर भुइँमा लड़िरहेथ्यो। सूर्यप्रकाशको घरमा मृत्युकै खबर सुनेर पुगेको हर्कमानलाई तर सूर्यप्रकाशको लाश देखेपछि जीवन ज्यादै खेलॉंची लाग्यो।
घरदेखि लाश निकाल्दा दुई-तीनजना स्वास्नीमान्छेले समाएकी स्व. सूर्यप्रकाशकी विधवा जिउ नै छाड़ेर रोइरहेकी थिई। त्यही समय असाध्यै कमजोरी सूर्यप्रकाशकी स्वास्नी देखेर हर्कमानले पुन: एउटा दुर्घटनाको आशङ्का गरेको थियो।
उसले आफ्नो उपस्थिति अनिवार्य ठानेको थियो त्यसैले अघिल्लो दिन र भोलिपल्ट पनि ऊ दिनभरि त्यहीँ थियो तर कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरू कामकै दिन मात्र गए। पैँतालिस दिनको कामको चाहिँ खबर हर्कमानलाई घरमै आयो। हर्कमानलाई मात्रै। पैँतालिसको काममा जॉंदा अन्तिमपल्ट देखेको हो। मर्छ,बॉंच्दैन।—हर्कमानभित्र दह्रो विश्वास पल्हाएको थियो झन्डै दस वर्षअघिको त्यो दिन—सेतो लुगामा बेह्रिएकी शारीरिक र मानसिक दुवै पीरले ग्रस्त स्त्री देखेपछि ।